Unogona kundibatsira kuisa iyi mharidzo pamwechete? Musangano wangu uri muawa. Ini handisi kuwana iyo slidei. Ndiwo mutserendende usiri iwo. $ #! * Ndiro tafura isiriyo. Inzwi rakajairika? Ipapo haUSI kushandisa inoshanda yekuratidzira manejimendi zano Uye, semhedzisiro, uri kurasikirwa nenguva, zviwanikwa uye, pamusoro pezvose, bhizinesi. Mharidzo manejimendi inova nechokwadi chekuti iro chairo meseji rinofambiswa panguva inonyanya kukosha - kana munhu wekutengesa achitaura ne